China Open Type Fibre Laser manapaka Machine Manufacturer sy Supplier | Guo Hong
Masinina fanapahana laser fibre karazana misokatra, ny masinina iray manontolo dia mandray rafitra fitetezana sy pinion drive, natao manokana ho an'ny karazan-taratasy rehetra. Mora ho an'ny mpampiasa ny miasa sy mikojakoja. Mandritra izany fotoana izany, ny fizotran'ny fivoriambe henjana dia miantoka ny fiasan'ny milina miorina tsara. Masinina fanapahana laser fibre optika manome ny mpampiasa fahaiza-manao fanapahana mahery vaika sy fahombiazany miaraka amina kojakoja ambony naoty ambony indrindra, izay safidy tsara ho an'ireo mpampiasa handrindrana karazana toekarena.
Kabinetra fanaraha-maso tsy miankina
Ny singa elektrika rehetra sy ny loharano laser dia natsofoka tao amin'ny kabinetra fanaraha-maso tsy miankina miaraka amina endrika vovoka hanamafisana ny androm-piainan'ireo singa elektrika.
Termostat mandeha ho azy
Ny kabinetra fanaraha-maso dia misy fitaovana amin'ny rivotra ho an'ny mari-pana tsy miovaova, izay afaka misoroka ny fahasimban'ny hafanana be loatra amin'ny singa amin'ny fahavaratra.
1. fanapahana avo lenta
2. Haingam-pandeha sy fahombiazana * Fikojakojana ambany
4. Toe-javatra iainana maitso sy azo antoka
Fiantohana 5.3 taona
Serivisy 6,24 amin'ny Internet
7. Fanohanana ara-teknika amin'ny fiainana.
Teo aloha: Masinina manapaka laser vita amin'ny fibre tanteraka
Manaraka: Masinina fanapahana laser fibre takelaka
vidin'ny milina laser cnc
cnc tamin'ny laser milina
vidin'ny laser fibre
fanapahana laser fibre
mpamatsy laser fanapahana laser
milina fanapahana laser amidy
fanapahana laser vy amidy
masinina fanapahana laser kely